Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण 'विद्यालय बन्द’ को विकल्प online होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ : डा. कोजू
‘विद्यालय बन्द’ को विकल्प online होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ : डा. कोजू
८ बैशाख २०७८, बुधबार २०:३५
नेशनल प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य तथा एन प्याब्सन भक्तपुरका पूर्व अध्यक्ष डा. राजेन्द्र कोजूसँग समसामयिक शैक्षिक विषयमा लिईएको अन्तरवार्ता प्रस्तुत गरिएको छ ।
 नेपाल सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने निणर्य गरेको तपाईलाई अवगत नै होला । तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
हो, सरकारले निणर्य गरेको छ । मैले यसलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेरेको छुँ । विगतमा पनि ९ महिनासम्म सरकारले विद्यालय बन्द गरेकै हो । यसको परिणाम कस्तो भयो, यो हामी सबैले भोगेकै कुरा हो । सरकारको निणर्यको औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै आधार हिजोका दिनमा बनेन । त्यसले नेपालको विद्यालय शिक्षामा गम्भीर असर परेको छ । यो अपुरणीय क्षतिको असर अझै धेरै वर्ष पर्नेछ । त्यसैले यो निणर्यको म आलोचना गर्छु ।
 तपाईले त, हिजोका दिनमा महामारी पीडित पेशा व्यवसायी संघर्ष समितिको महासचिवको जिम्मेवारीमा धेरै विरोध पनि गर्नुभयो । खासमा यस्तो किन गर्नुपर्यो ?
हो, मैले सरकारको विरोध गर्न वाध्य भएँ । हामीले वा हाम्रो संघर्ष समितिले बालुवाटार घेराऊको कार्यक्रम पनि गर्यौं । सरकारको आदेशको पालना गरी हामीले ९ महिना विद्यालय बन्द गर्यौं । हाम्रो आम्दानी शून्य प्रायः थियो । online कक्षा संचालन गर्यौ । विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन दिइएन र उठाउन सकेनौं । ऋणको ब्याज, बैंकको किस्ता, घरभाडा, शिक्षक तलब भुक्तानी गर्न सकेनौं । हामी पीडित गर्यौं । सरकारले हामीलाई कुनै राहत दिइएन । उल्टै जरिवाना असुल गर्यो । हाम्रो पूँजी र लगानीको सुरक्षा भएन । तसर्थ, निजी क्षेत्रमा गरिएका लगानी राष्ट्रिय लगानीको रुपमा स्वीकार गरी हाम्रो सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम र प्याकेज घोषणा गरियोस् भन्ने माग राखी आन्दोलन गरेका छौं ।
 कति वटा संघ संस्था आवद्ध थिए ?
यातायात क्षेत्र, विद्यालय क्षेत्र, पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित ४३ वटा राष्ट्रव्यापी संघसंस्थाहरु आवद्ध थिए ।
 लगानी तपाईहरु गर्ने, नाफा तपाईहरुको खाने, अनि तपाईहरुको सुरक्षा गर्ने जिम्मा राज्यको हुने भन्नुहुन्छ तपाई । यो ठीक हो र ?
कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ? राज्य भित्र रहेका राज्य कानूनी बन्दोबस्त अनुसार खोलिएका सबै व्यवसाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, विद्यालय, विद्यालयको लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व र जिम्मा राज्यको हो । लगानी गरेपछि नाफा लिनु गलत होईन ।
निजी क्षेत्रबाट यस सेवा तथा वस्तुको उत्पादन गरी देश र जनताका लागि योगदान गरिरहेको छ । देशको विकासका महत्वपूणर् आधार क्षेत्रहरुमा लगानी गरी राष्ट्रका लागि लगानी गरी सेवा गरिरहेका सबै क्षेत्रलाई संकटका बेला राजाले सहयोग गर्नु, सरकारले विभिन्न किसिमले सुरक्षा दिनु अनिवार्य शर्त हुन्छन् । निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरु त नेपालको गुणस्तरीय शिक्षाको मानक हुन् । यसलाई बचाउनुपर्छ, प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ । यो सरकारको जिम्मेवारी हो । राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ ।
 विद्यालय बन्द कै कुरा गरौ न । बन्दको विकल्प के त ?
नेपाल सरकारले कोभिड विरुद्ध लड्ने एउटै मात्र उपाय ‘विद्यालय बन्द’ देखेको छ । यो चिन्तन नै गलत हो । यसको विकल्प online मानेर हामीले गत साल ९ महिना अभ्यास गरेकै हौं । पहुँच र प्रभावकारिताको हिसाबले यो उचित विकल्प होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । यो त हामीले प्रत्यक्ष भोगेको देखेको तथ्य नै हो नि । ऋबिकक च्ययm त्भबअजष्लन जति अरु कुनै पनि विधि प्रभावकारी त हुनै सक्दैन । फेरि पनि सिकाईका धेरै विधि मध्ये यो एउटा विधि मात्र हो । तर विद्यालय तहका लागि यो सिकाई उपलब्धीको हिसाबले ग्लष्त्रगभ विकल्प हुँदै होईन । बरु, शिक्षाविद्हरुसँग परामर्श गरी सुरक्षाका अरु उपाय खोजी गरी विद्यार्थी विद्यालयमै आउने गरी पढाउने उपयुक्त व्यवस्था गर्नु नै उचित हुनेछ ।
 अभिभावक मान्दैनन् त विद्यालय पठाउन ।
यो गलत हो । विगतको अनुभव र भोगाइका साक्षी हुन् अभिभावक हल्लाका पछि लागेर १ वर्ष डामाडोल भएको तीतो अनुभव छ अभिभावकहरुसँग । बच्चा घरमा भन्दा स्कूलमा सुरक्षित छ भन्ने कुरामा ढुक्क छन् अभिभावक ।
 विज्ञहरुको कुरा पनि नमान्ने तपाईहरु ?
आफ्नो नानीका सुरक्षाका लागि पढाई, लेखाई र सिकाईका लागि विज्ञहरु भन्दा आमाबुबा, अभिभावक र शिक्षक शिक्षिकाहरु सयौं गुणा विज्ञ हुन् । यसलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । उहाँहरुको अनुभव, भोगाई कुनै विज्ञको पढेको ज्ञान भन्दा रतिभर पनि कम छैन ।
 विद्यालय संचालकहरु विद्यालयका मालिकहरु आफ्नो पेशा र लगानी बचाउन हल्ला गरिरहेको आरोप छ नि तपाईहरुलाई ?
गलत, सर्वथा गलत हो यो तर्क । त्यसो भए के स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ भनाउँदाहरु, औषधि कम्पनीका मालिकहरु आफ्नो पेशा व्यवसाय बचाउन कोकोहल गरिरहेको हो भन्न मिल्छ । उहाँहरु पनि ध्ज्इ को बनभलत भन्न मिल्छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रका माफिया र दलालहरुको चंगुलमा परेर ध्ज्इ आतंक सिर्जना गरिरहेका छन् भन्न मिल्छ ? यदि त्यसो होईन भने एउटा कुरा के सत्य हो भने कोभिडलाई अतिरञ्जना गरेकै हो । आवश्यकताभन्दा बढी हल्ला गरेकै हो । मान्छेलाई आतंकीत पारेकै हो । यसमा षडयन्त्रको गन्ध आएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।
 अब के गर्ने त ?
सुरक्षाका उपाय अपनाएर बच्चाको मनोविज्ञान र मनोबललाई दरिलो र बलियो बनाई विद्यालय संचालन गर्नुपर्छ । समस्यामाथि कम बहस गरी समाधानका लागि सही कर्म गर्दै अगाडि जानु नै अहिलेको विकल्प हो ।
 Online कक्षा गर्नु भनेको छ, यसको लागि के गर्नुपर्छ ?
online कक्षा चलाउने भए निम्न व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ,
क) विद्यालयको घरभाडा सरकारले तिर्ने ।
ख) शिक्षकहरुलाई तलब सरकारले दिने ।
ग) विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क इन्टरनेट र ल्यापटपको व्यवस्था सरकारले गर्ने ।
घ) बन्द अवधिभर कर, जरिवाना र राजश्व नलिने ।
ङ) ऋणको ब्याज र किस्ता सरकारले तिर्ने ।